संसारकै सबैभन्दा सानो गाउँ, जहाँ ८ साल पछि जन्मियो एउटा बच्चा ! « Lokpath
२०७७, १९ पुष आईतवार २२:३३
प्रकाशित मिति : २०७७, १९ पुष आईतवार २२:३३
काठमाडौं । हामीले यस्ता अनौठा खबर त दिनदिनै पढ्दै र सुन्दै आएका नै हौँला । यस्तै एउटा समाचारको बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ । कतै जनसंख्या धेरै भएर उकुसमुकुस भएको अवस्थामा कतै जम्मा जनसंख्या २९ रहेको छ ।
काठमाडौं । रामायणमा रावणका भाइ कुम्भकर्णको बारेमा त सबैलाई थाहा होला । उनी
११ वर्षका बालकले बनाए हावाबाट चल्ने बाइक !
काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनका ११ वर्षका बालकले सबैलाई चकित पारेका छन्
काठमाडौं । संसारमा बिभिन्न कुराहरु महिला र पुरुषका लागि निर्माण गरिएको छ ।
विवाहअघि हुनेवाला श्रीमानसँग ६ लाख मागिन्, सपिङ गरेपछि भइन् फरार !
काठमाडौं । भारतको लखनउमा एक बेहुली विवाहअघि नै हुनेवाला श्रीमानसँग पैसा मागेर फरार